We.com.mm - လူသားတွေကရော ခွေးတွေအတွက်အကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေဟုတ်ပါ့မလား
( Zawgyi ဖြင့်ဖတ်ရန် )
လူသားတွေကရော ခွေးတွေအတွက်အကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေဟုတ်ပါ့မလား ?
ခွေးတွေဟာ လူတွေအတွက်တော့ အကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေပါပဲ။ အဲဒီဆိုရိုးအမှန်တကယ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတော့ ကိုလံဘီယာနိုင်ငံ ကအဖြစ်အပျက်လေးတစ်ခုက မှန်ကန်ကြောင်းသက်သေပြလိုက်ပါတယ်။
ကိုလံဘီယာနိုင်ငံက လူစည်ကားတဲ့လမ်းတစ်ခုပေါ်မှာ ဆိုင်ကယ်စီးလာတဲ့လူတစ်ယောက်အမူးလွန်ပြီး အိပ်ပျော်နေတယ်။ လမ်းမပေါ်မှာ ကားသိပ်မရှိပေမယ့် လမ်းသွားလမ်းလာနဲ့ဆိုင်ကယ်တွေအများကြီးပဲ။ အမူးသမား နဲ့အတူတူပါလာတဲ့ Canine အမျိုးအစားခွေးကလေးဟာ သခင်အနားကမခွာပဲ သူ့ကိုယ်လုံးနဲ့ကာကွယ်ပေးခဲ့တာပါ။ အမူးသမားကို လာနှိုးတဲ့သူတွေကိုလည်း ဒေါသတကြီးဟောင်ပြီး အနားမကပ်နိုင်အောင် ကာကွယ်ပေးခဲ့တယ်။
အဲဒီအချိန်မှာ ရဲဝန်ထမ်းတစ်ယောက်ရောက်လာပြီး ဆိုင်ကယ်ဦးထုပ်ကိုချွတ်လိုက်တော့မှ အမူးသမားလည်းနိုးလာခဲ့တာပါ။ နိုးလာခဲ့သည့်တိုင်အောင် သခင်ဖြစ်သူရဲ့မျက်နှာကို ခွေးကလေးကလျှာနဲ့လျက်ပြီး သက်သာအောင်ပြုလုပ်ပေးနေခဲ့တယ်။ နောက်ဆုံးမှာတော့ အမူးသမားကို ရဲဝန်ထမ်းကတွဲခေါ်သွားခဲ့ရတယ်။
ဒီအဖြစ်အပျက်လေးဟာ ဖြစ်တောင့်ဖြစ်ခဲကိစ္စတွေထဲကတစ်ခုပါ။ ခွေးကလေးတွေက လူသားတွေအပေါ်ထားတဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာနဲ့သစ္စာတရားကို ပြသခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့် လူသားတွေကရော အဲဒီအရာတွေနဲ့အမှန်တကယ်မှထိုက်တန်ပါရဲ့လားပေါ့..။
ခွေးလေးတွေဟာ လူသားတွေအတွက် အကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေတဲ့ ....။
ဒါဆို လူသားတွေကရော ခွေးကလေးတွေရဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်ဖို့ထိုက်တန်ပါရဲ့လား ?
( Unicode ျဖင္႕ဖတ္ရန္ )
ေခြးေတြဟာ လူေတြအတြက္ေတာ႕ အေကာင္းဆုံးမိတ္ေဆြပါပဲ။ အဲဒီဆုိရုိးအမွန္တကယ္ျဖစ္တယ္ဆုိတာကုိေတာ႕ ကုိလံဘီယာႏုိင္ငံ ကအျဖစ္အပ်က္ေလးတစ္ခုက မွန္ကန္ေၾကာင္းသက္ေသျပလုိက္ပါတယ္။
ကုိလံဘီယာႏုိင္ငံက လူစည္ကားတဲ႕လမ္းတစ္ခုေပၚမွာ ဆုိင္ကယ္စီးလာတဲ႕လူတစ္ေယာက္အမူးလြန္ျပီး အိပ္ေပ်ာ္ေနတယ္။ လမ္းမေပၚမွာ ကားသိပ္မရွိေပမယ္႔ လမ္းသြားလမ္းလာနဲ႕ဆုိင္ကယ္ေတြအမ်ားၾကီးပဲ။ အမူးသမား နဲ႕အတူတူပါလာတဲ႕ Canine အမ်ဳိးအစားေခြးကေလးဟာ သခင္အနားကမခြာပဲ သူ႕ကုိယ္လုံးနဲ႕ကာကြယ္ေပးခဲ႕တာပါ။ အမူးသမားကုိ လာႏွဳိးတဲ႕သူေတြကုိလည္း ေဒါသတၾကီးေဟာင္ျပီး အနားမကပ္ႏုိင္ေအာင္ ကာကြယ္ေပးခဲ႕တယ္။
အဲဒီအခ်ိန္မွာ ရဲ၀န္ထမ္းတစ္ေယာက္ေရာက္လာျပီး ဆုိင္ကယ္ဦးထုပ္ကုိခ်ြတ္လုိက္ေတာ႕မွ အမူးသမားလည္းႏုိးလာခဲ႕တာပါ။ ႏုိးလာခဲ႕သည္႕တုိင္ေအာင္ သခင္ျဖစ္သူရဲ႕မ်က္ႏွာကုိ ေခြးကေလးကလွ်ာနဲ႕လ်က္ျပီး သက္သာေအာင္ျပဳလုပ္ေပးေနခဲ႕တယ္။ ေနာက္ဆုံးမွာေတာ႕ အမူးသမားကုိ ရဲ၀န္ထမ္းကတြဲေခၚသြားခဲ႕ရတယ္။
ဒီအျဖစ္အပ်က္ေလးဟာ ျဖစ္ေတာင္႕ျဖစ္ခဲကိစၥေတြထဲကတစ္ခုပါ။ ေခြးကေလးေတြက လူသားေတြအေပၚထားတဲ႕ခ်စ္ျခင္းေမတၱာနဲ႕သစၥာတရားကုိ ျပသခဲ႕တယ္။ ဒါေပမယ္႕ လူသားေတြကေရာ အဲဒီအရာေတြနဲ႕အမွန္တကယ္မွ ထုိက္တန္ပါရဲ႕လားေပါ႕ …..။
ေခြးေလးေတြဟာ လူသားေတြအတြက္ အေကာင္းဆုံးမိတ္ေဆြတဲ႕ ....။
ဒါဆုိ လူသားေတြကေရာ ေခြးကေလးေတြရဲ႕မိတ္ေဆြျဖစ္ဖုိ႕ထုိက္တန္ပါရဲ႕လား ?
ဖျာပုံမြို့နယ်မှာ မတော်တဆ မီးလောင်မှုကြောင့် အိမ်ခြေ(၁၆၀)ကျော်လောက် ဆုံးရှုံးခဲ့
ဦးကင်းကောင်အကြောင်းပြောပြခဲ့တဲ့ ဦးဧရာရဲ့ ဝမ်းနည်းဖွယ် ရင်ဖွင့်စကားသံများ
ခရု နဲ့ ကမာစိမ်းစားကြိုက်သူတွေသတိထားနိုင်စေဖို့
Apple ကုမ္ပဏီ ကို ဂျင်းထည့်ရင် ထောင်ကျမှာလား
ဝိုင်ဖိုင် နဲ့ SD Card တွေပါမှာမဟုတ်တော့တဲ့ Huawei